Nhetembo - Zvinyorwa Nhau | Zvinyorwa Nhau (Peji 2)
Rosa Chacel. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo dzakasarudzwa
Rosa Chacel, nyanduri, munyori wenyaya uye munyori wenhau, akashaya musi waNyamavhuvhu 7, 1994. Uku ndiko kusarudzwa kwenhetembo dzake dzekumurangarira.
Claudio Rodríguez. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo
Ichi chiyeuchidzo chitsva chekufa kwemunyori weZamorano Claudio Rodríguez. Uku kusarudzwa kwenhetembo dzekumurangarira.
Ichi chiitiko chitsva chekuzvarwa kwanyanduri Vladimir Mayakovski. Uku kusarudzwa kwenhetembo dzake kuti mumurangarire.
José Ángel Valente. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo
Icho chiitiko chitsva chekufa kwemunyori wechiGalician José Ángel Valente. Uku kusarudzwa kwenhetembo dzake kuti mumurangarire.
Kusarudzwa kwemashoko ekunyora muna Chikunguru
Uku ndiko kusarudzwa kwematanhatu emazita edhisheni enhau ari kubuda muna Chikunguru. Kune ese kuravira.
Giacomo Leopardi. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Kusarudzwa kwenhetembo
Giacomo Leopardi, mudetembi weItari, akazvarwa pazuva rakaita nhasi muna 1798. Iyi sarudzo yenhetembo dzekumurangarira.
Vicente Nuñez, mudetembi wekuCórdoba, akashaya pazuva rakaita nhasi mugore ra2002. Kumurangarira kana kumuwana, uku ndiko kusarudza kwenhetembo dzake.
Pierre Reverdy, mudetembi wechiFrench, akashaya pazuva rakaita nhasi muna 1960. Iyi sarudzo yenhetembo dzake kuverenga, kurangarira kana kuziva.
Félix de Azúa muSpanish anofungidzirwa seimwe yeanonyanya kufumura mabhuku ezana ramakore rechiXNUMX. Huya, udzidze zvakawanda pamusoro pemunyori nebasa rake.
Juan Gelman. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Dzimwe nhetembo
Juan Gelman akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muna 1930. Mukurangarira kwake, uku kusarudzwa kwemamwe enhetembo dzake kuti amuwane.
León Felipe akazvarwa pazuva rakaita nhasi muZamora. Uku kusarudzwa kwenhetembo nhanhatu kubva kubasa rake kuti averenge mundangariro yake.
Charles Baudelaire akazvarwa pazuva rakaita nhasi muParis muna 1821. Uku ndiko kusarudzwa kwenhetembo shanu kuti dziverenge mundangariro yake.
Nhetembo dzeChizvarwa che27
Nhetembo dzeChizvarwa chemakumi maviri neshanu chakaratidza pamberi uye shure muzvinyorwa zveSpanish. Uya, dzidza zvakawanda nezvevanyori vavo nemabasa avo.
Ndinokuvenga sezvandisina kumbobvira ndada chero munhu
Ini ndinokuvenga seni handina kumbobvira ndada chero munhu ndiye wekutanga muunganidzwa wenhetembo naLuis Ramiro, Spanish munyori uye muimbi. Huya, ziva zvakawanda nezve basa uye munyori.
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Akasarudzwa mannets
Gertrudis Gómez de Avellaneda akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muna 1814 muCamagüey, Cuba. Kuti umurangarire, pane sarudzo yemanyoni kubva kubasa kwake.
Gabriel Celaya. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Nhetembo
Gabriel Celaya akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muna 1911 muHernani. Aigara muMadrid, kwaakasangana nanyanduri ve ...
Blanca Valera. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo
Blanca Varela, mudetembi wePeruvia, akashaya pazuva rakafanana nanhasi muna 2009. Kumurangarira isarudzo iyi yenhetembo kubva kubasa rake.
Michel Houellebecq, munyori ane mukurumbira uye anopokana wechiFrench, ane zuva rake rekuzvarwa nhasi. Zvakare munyori wenyaya uye mudetembi, ndinoratidzira mashanu enhetembo dzake.
Mabhuku aElvira Sastre
Nhetembo uye nhoroondo yaElvira Sastre yakauya kuzotora nzvimbo mumavara eCastilian. Huya, udzidze zvakawanda pamusoro pemunyori nebasa rake.
Heinrich Heine, wekupedzisira wechiGerman mudetembi mudetembi. 6 nhetembo
Heinrich Heine ndomumwe wevanyori vadetembi veGerman vane rudo uye nhasi vashaya muna 1856. Ndinovarangarira nesarudzo yenhetembo dzavo.
Tsvaga kuti izwi rekuti kudanana rinorevei, hunhu hupi hunoritsanangura, mhando dzerudo, uye ndeapi makirasi aripo mumabhuku.
Manuel Machado. Chirangaridzo cherufu rwake. Nhetembo
Icho chiyeuchidzo chitsva chekufa kwaManuel Machado. Mukurangarira kwake, heino sarudzo yenhetembo.
Guadalupe Grande. 4 yenhetembo dzake mundangariro dzake
Guadalupe Grande, nyanduri, munyori uye mutsoropodzi, akafa pakutanga kwegore nekuda kwechirwere chemwoyo. Aya ndiwo mana enhetembo dzake mundangariro yake.
Ndira. Sarudzo yenhetembo shanu dzemwedzi wechando
Kusarudzwa kwemoneti uye nhetembo dzakasiyana nevanyori venguva dzese, kubva kuQuevedo kuenda kuMachado kuenda kuNeruda kana Paz.
Kune mhando dzakasiyana dzemhando yenhetembo, zvinoenderana nemamita endima dzadzo, mutinhimira wadzo kana kukura kwedzimba dzadzo. Huya udzidze zvakawanda nezvazvo.
Iwo mazwi enziyo zvinyorwa zvinozivikanwa nekutaura kwe "nhetembo" yemunyori. Huya, udzidze zvakawanda nezvazvo.
Pfungwa dzekunyora bhuku
Kuve uine parutivi nhevedzano yemazano ekunyora bhuku, inobatsira chirongwa chekugadzira. Huya uzive matipi akati wandei achakubatsira.
Francisco Brines. Cervantes 2020 Mubayiro. Dzimwe nhetembo
Francisco Brines, mudetembi weValencian weGeneration yema50s, akahwina mubairo weCervantes 2020. Uku ndiko kusarudzwa kwenhetembo dzake.
Sylvia Plath. 4 nhetembo dzekupemberera kuzvarwa kwake
Sylvia Plath aive mudetembi ane hupenyu hwakaomarara uye azere nematambudziko epfungwa. Idzi ndidzo nhetembo ina dzekupemberera kuzvarwa kwake.
Arthur Rimbaud. Dzimwe nhetembo dzekuzvarwa kwake
Arthur Rimbaud akazvarwa pazuva rakaita nhasi muna 1854. Uku ndiko kusarudzwa kweimwe nhetembo yekuverenga nekurangarira.
Nziyo izwi rakafara, dzimwe nguva rakaoma kutsanangura zvichienderana nemaziso anoshandiswa pakumisikidzwa. Huya udzidze zvakawanda nezvazvo.
Louise Glück anokunda iyo 2020 Nobel Prize muMabhuku
Louise Glück, mudetembi wekuAmerica, akahwina mubairo we2020 Nobel muLiterature kubva kuSweden Academy.
Anaphora chiumbirwo chimiro chinoshandiswa zvakanyanya pakati pevanyanduri uye vanyori venziyo. Uya udzidze zvakawanda nezve ino zviwanikwa uye mashandisiro ayo.
Antonio Gala anotendeuka makumi mapfumbamwe nhasi. Kupemberera uku ndiko kusarudzwa kwemataneti matanhatu nemunyori uyu weCordovan uye mudetembi.
Dadaism isangano rehunyanzvi rakavambwa nemudetembi wechiRomania Tristan Tzara (1896 - 1963). Huya, dzidza zvakawanda nezve ino yazvino.
Gerardo Diego Cendoya aive mudetembi wechiSpanish uye munyori, nhengo yeinonzi Chizvarwa chemakumi maviri neshanu. Huya, udzidze zvakawanda nezve basa nemunyori waro.
Coplas a la muerte de su padre chidimbu che nhetembo neSpanish pre-Renaissance Jorge Manrique. Huya, dzidza zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Jorge Manrique aive mudetembi anozivikanwa wechiSpanish uye akangwara wepamberi peRenaissance. Huya udzidze zvakawanda nezvemunyori nebasa rake.
Juan de Mena aive munyori wechiSpanish uyo aigara achitsvaga dudziro yakakwira. Huya, ziva zvakawanda nezvemunyori nebasa rake.
Luis de Góngora aive mudetembi ane mukurumbira uye mutambi wemitambo weSpanish Golden Age. Huya udzidze zvakawanda pamusoro pemunyori nebasa rake rakakura.
Blas de Otero aive mudetembi wechiSpanish ane nhaka ndeimwe yeanonyanya kuratidzwa emabhuku epashure pehondo. Huya udzidze zvakawanda nezvemunyori nebasa rake.
DH Lawrence. New gore rekuzvarwa kwake. 7 nhetembo
DH Lawrence akazvarwa pazuva rakaita nhasi muna 1885. Aya ndiwo mamwe enhetembo dzake dzekupemberera zuva rekuyeuka.
Platero y yo ibasa remifananidzo nemunyori weIberia José Ramón Jiménez. Huya udzidze zvakawanda nezve chidimbu ichi nemunyori waro.
José Martí aive mumwe wevakakurumbira vadzidzi vekuAmerica kusunungurwa. Huya, ziva zvakawanda nezvemunyori nebasa rake.
Nicanor Parra aive mudetembi wekuChile uyo akazvarwa pazuva rakaita nhasi muna1914. Ndinoyeuka zuva rekucherechedza pamwe nedzimwe nhetembo dzake.
Jorge Guillén Álvarez aive mudetembi weMalaga aine tariro isina kujairika pasirese. Huya udzidze zvakawanda nezvemunyori nebasa rake.
Pamabhangi eSar izita remunyori Rosalía de Castro. Muzuva rake aive asinganzwisisike. Huya, dzidza zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
Maitiro ekuongorora nhetembo
Kuti uzive kuongorora nhetembo, zvakakosha kuti uzive zvinhu zvinoigadzira. Uya, tsvaga zvese zvaunoda kuti uzive nezvazvo.
Pedro Antonio de Alarcón. Chirangaridzo cherufu rwake. Sonnets
Pachirangaridzo chitsva chekufa kwemutori wenhau, munyori wenhau, munyori wemitambo uye mudetembi Pedro Antonio de Alarcón ndinorangarira mashanu emambure ake.
Iwo +10 sonnets dzakakurumbira naFrancisco de Quevedo
Pinda uye unakirwe nemasikoni akakurumbira naQuevedo, tenzi wetsamba uyo anokwanisa kuburitsa manzwiro mazhinji kuburikidza nendima dzake.
Vakadzi havana hanya munyika yeZvinyorwa. Neichi chikonzero, isu tinovapa ruremekedzo kwavari nedzimwe dzakanakisa nhetembo dzakanyorwa navo.
"Kuora mwoyo." Nhetembo inorumbidza macabre uye inotyisa
Kune nhetembo dzakafanana nekudengenyeka kwenyika, senge kutinhira kunoenda kuburikidza nehupenyu hwako hwese. Kushupika ndechimwe chazvo. Oode kune macabre, uye inotyisa.
Friedrich Hölderlin. Chirangaridzo cherufu rwake. Mitsara uye nhetembo
Friedrich Hölderlin, pamwe mudetembi mukuru wechiGerman Romanticism, akashaya pazuva rakaita nhasi muna 1843. Uku ndiko kusarudzwa kwemitsara yake uye nhetembo.
"Mashoko aJulia" inhetembo yakatsaurirwa kuna Goytisolo kumwanasikana wake. Iri mubhuku rezita rimwe chete rakaburitswa muna 1979. Huyai, muzive zvakawanda nezve zvinyorwa uye nemunyori wazvo.
Gonzalo de Berceo aive mufundisi wechiSpanish uye mudetembi uyo akapfuura mumabhuku eCastilian nekuda kwemipiro yake yemitauro. Huya, dzidza zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Luis de Góngora afa nhasi muna 1627. Aya ndiwo maneti matanhatu akasarudzwa kubva kubasa rake kuyeuka mumwe wevanonyanya kudetemba veGolden Age.
Walt Whitman, mudetembi weAmerica, akazvarwa muna 1819 uye akafa muna 1892. Muhupenyu hwake hwese, pamusoro pekutisiya ...
Alexander Pope, munyori wechiChirungu uye muturikiri pakati pezana regumi nemanomwe negumi nemasere emakore, ari kupemberera zuva rake rekuzvarwa nhasi. Izvi zvakasarudzwa zvidimbu zvemabasa ake.
Galician Zvinyorwa Zuva. 4 Vanyori veGalician nenhetembo dzavo
Nhasi uno ChiGalician Literature Day inopembererwa. Neichi chikonzero, ini ndinosarudza nhetembo ina nana vadetembi vemazuva ano veGalician. Kuti uwane kana kuverenga zvekare.
Ana Rossetti. 4 nhetembo dzekupemberera zuva rako rekuzvarwa
Munyori uye mudetembi kubva kuna Cadiz Ana Rossetti anotendeuka zuva rake rekuzvarwa nhasi. Kupemberera, ndinotora idzi nhetembo ina dzakasarudzwa kubva kubasa rake.
John Dryden. Makore 320 mushure mekufa kwake. Mitsara uye nhetembo
John Dryden ndiye nyanduri wequintessential weChirungu Kudzoreredza muzana ramakore rechi320. Nhasi igore rechi XNUMX rekufa kwake.
Pedro Salinas aive mumwe wevanyori vane hunyanzvi hwekutanga kwezana ramakore rechi27. Akakodzera mumiriri weGeneration yeXNUMX. Huya, udzidze zvakawanda nezvake nebasa rake.
Isu tinoongorora muchidimbu iro basa «Romancero gitano» naFG Lorca
Isu tinoongorora rakanakisa basa "Romancero gitano" naFG Lorca, rimwe remabhuku ane mukurumbira akaburitswa nanyanduri wekuGranada.
Isu tinoongorora zvakadzama iro basa "Campos de Castilla", nemunyori anonakidza Antonio Machado. Pinda uye uzive zvese zvakavanzika zvebhuku rino.
Isu tinoongorora rimwe remabasa akakosha naRubén Darío: Prosas Profanas. Pinda uye iwe uchaona izvo zviri nezvazvo uye zvimwe zvakawanda.
Zuva rebhuku. Kusarudzwa kwemitsara inozivikanwa uye zvidimbu zvemabhuku
PaZuva reBhuku risingaenzanisike, pane kadiki kadiki kemunhu akasarudzika ezvimedu zvezvinyorwa zvevamwe vanyori vedu vepasirese.
Octavio Paz akafa pazuva rakafanana nanhasi muna 1998 muCooacán, Mexico, nyika yaakaberekerwa. Mubayiro weNobel muMabhuku muna1990, mundangariro dzake ndinowana nhetembo nhanhatu.
VicenteEspinel ibhuku rinosungirwa munhetembo dzeCastilian. Yake yegumi spinel inhaka kune vanyanduri veLatin. Huya udzidze zvakawanda nezvake nebasa rake.
Kumuka kwemhepo. Nhetembo Anthology, naJuan Ramón Torregrosa
Ruva remhepo nderimwe remanyoro uye nhetembo dzakakwaniswa kwazvo mumutauro wechiCastilian. Uya udzidze zvakawanda nezve basa uye muparidzi waro.
Isu tinoongorora zvakadzama iro basa 'Panowanikwa kukanganikwa', naLuis Cernuda, aive mumwe wevananyanduri vakakurumbira veGeneration ye27.
Iwo maOffreds mabhuku chipupuriro chekuti tarenda nekusvika sei pasocial media musanganiswa unobereka. Huya, dzidza zvakawanda nezve basa uye munyori waro.
César Vallejo aive mumwe wevanonyanya kukosha vanyori vezana ramakore rechiXNUMX, munyika yake nepasirese pasirese. Pinda uye uzive basa rake renhetembo.
Nhetembo dzaGil de Biedma
Nhetembo dzaGil de Biedma inyaya inosungirwa munhetembo dzanhasi dzeSpanish. Munyori akagadzira basa rakanaka. Huya, ziva zvakawanda nezvake uye chinyoreso chake.
Antonio Machado. Mitsara makumi matatu. Chirangaridzo cherufu rwake
Antonio Machado afa nhasi mu1939 mukutapwa kweFrance. Aive iye mudiki mumiriri weGeneration ya '98. Aya mazwi makumi matatu ekumurangarira.
José Zorrilla. Zvakawanda kupfuura Don Juan Tenorio. 4 nhetembo
José Zorrilla akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muna 1817 uye akanyora zvakawanda kupfuura Don Juan Tenorio. Idzi ndidzo nhetembo ina dzakasarudzwa kubva mubhuku rake rerwiyo
6 yemhando dzakanakisa dzetsitsi muSpanish. Nezuva reValentine.
Hapana chimwe senge mamwe rudo maneti kupemberera Zuva reValentine kune rimwe gore. Aya matanhatu zvimwe akanyanya kunaka pane ese nguva, uye anozivikanwa kwazvo.
Damaso Alonso. 5 sonnets pagore rechimakumi matatu rekufa kwake
Dámaso Alonso akafa pazuva rakafanana nanhasi muMadrid makore makumi matatu apfuura. Ndinoyeuka idzi mannets kubva kubasa kwake mundangariro yake.
Rubén Darío naJorge Guillén vaviri vanyori vakakurumbira vanyori vane zuva ravo rekuzvarwa nhasi. Ndinoyeuka manhamba ake nemamwe mavhesi ake.
Gabriela Mistral akashaya pazuva rakaita nhasi muna 1957 muNew York. Mubayiro weNobel, idzi idetembo mbiri dzekurangarira chimiro chake nebasa rake.
Miguel Hernández aive rimwe remanzwi ane mukurumbira mune zana ramakumi maviri mabhuku echiSpanish, mudetembi uye mutambi wemitambo. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Gibran Khalil ndomumwe wevanyori vakakurumbira munhoroondo yese. Pachirangaridzo chitsva chekuzvarwa kwake ndinorangarira mitsara nezvimedu kubva kuMuporofita.
2019 yapera.Bata bhalansi yemabhuku anotengesa zvakanyanya uye runyorwa urwu haruzove rwakasiyana zvakanyanya pari zvino. 6 yakaratidza zvinyorwa zvekunyepedzera uye zvisiri zvengano.
Juan Ramón Jiménez. Beyond Platero neni. 5 nhetembo
Juan Ramón Jiménez akazvarwa musi waZvita 23, 1881. Nhasi ndinorangarira chimiro chake chine nhetembo shanu kubva kubasa rake kupfuura rake rakakurumbira Platero y yo.
Emily Dickinson akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi muna 1830. Mumwe wevananyanduri vakakosha munhoroondo, ndinorangarira chimiro chake nemamwe madetembo ake.
Rainer Maria Rilke. Nhetembo nhatu dzekupemberera zuva rako rekuzvarwa
Rainer Maria Rilke aive mudetembi uye munyori wenhau uyo ​​akaberekerwa muPrague pazuva rakafanana nanhasi muna 1875. Aya ndiwo matanhatu enhetembo dzake dzekumurangarira.
Zuva rakaita nhasi mugore ra8 a. Quinto Horacio Flaco, mumwe wevanyori vadiki vekare munhoroondo, akafa. Ndinosarudza nhetembo 5 dzekumurangarira.
Joan Margarit ndiye akahwina mubairo we 2019 Cervantes Prize.
Sor Juana Ines De La Cruz. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 mamoneti
Mudhara weMexico uye mudetembi Sor Juana Inés de la Cruz akazvarwa pazuva rakaita nhasi muna 1648. Ini ndinoongorora chimiro chake uye ndinoshanda uye ndinosimbisa mana enhetembo dzake.
Luis Cernuda akafa musi waNovember 5, 1963 kuMexico City. Nhasi ndinomurangarira achiongorora chimiro chake nebasa rake uye achiburitsa ina yenhetembo dzake.
Iwo mabasa aWilliam Shakespeare anomiririra fuma yezvinyorwa zvevanhu, huya udzidze zvakawanda pamusoro pemabasa ake nehupenyu hwake.
Alfonsina Storni, chiratidzo cheArgentina postmodernism. 3 nhetembo
Alfonsina Storni, mudetembi weArgentina, icon of postmodernism, akashaya pazuva rakaita nhasi muna 1938. Ndinorangarira nhetembo dzake nhatu mundangariro yake.
Iwo makore makumi maviri nemanomwe kubva pakafa mudetembi Luis Rosales, zita guru reChizvarwa chemakumi matatu nematatu. Mukurangarira kwake ndinorangarira ina nhetembo dzake.
Maruva Ezvakaipa, magna anoshanda naCharles Baudelaire
Las flores del mal muenzaniso wakakwana weFrance kuora, chienzi chakakodzera kufadzwa uye kuongorora. Huya udzidze zvakawanda nezvake uye nemunyori wake.
Pane zuva rakaita nhasi Enrique Jardiel Poncela akazvarwa. Ini ndinorangarira divi rake risingazivikanwe semudetembi ane idzi nhetembo ina dzakasarudzwa.
Felix de Samaniego. Ngano dzakasarudzwa pazuva rekuzvarwa kwake
Pazuva rino Félix de Samaniego akazvarwa, rimwe remazita makuru etsamba dzeNguva yeChiedza. Ndinoyeuka dzimwe dzengano dzake.
Pamusi wegumi nemakumi matatu wekufa kwaEdgar Allan Poe ndinorangarira nhatu nhetembo dzake idzo dzandinofarira: Annabel Lee, Chiroto uye Unoda kuti vakude.
San Francisco nevamwe vanyori vana vakatumidza zvakafanana. Zvimedu zvemabasa.
Gumiguru 4, mabiko eSan Francisco, zvakare mutendi musande wemhuka. Ini ndinomurangarira nezvimedu zvebasa rake uye vamwe vanyori vana vakatumidza zvakafanana.
Nhetembo dzaRubén Darío
Rubén Darío aive akakosha mudetembi weNicaragua aifunga sababa vezvinyorwa zvemazuva ano muLatin America. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
TS Eliot. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 nhetembo pfupi
Chirangaridzo chitsva chekuzvarwa kwaTS Eliot, mudetembi akahwina Mubayiro weNobel muna 1948. Ndinoyeuka basa rake aine mana enhetembo dzake pfupi.
Avhareji Gunyana III. Spanish yechinyakare mabharadhi
Chinyorwa chechitatu chakatsaurwa kumabhuku epakati nepakati nekudzokororwa kweakadhindwa eSpanish maballads uye ayo anozivikanwa uye anozivikanwa zvinyorwa.
Ichi chiyeuchidzo chitsva chekufa kwemunyori wechiLatin mukuru, Publio Virgilio Marón. Ini ndinosarudza aya makumi maviri neshanu mitsara kubva kumabasa ake kuti ndimuyeuke.
Muchikamu chino chechipiri chakatsaurirwa kumazana emakore ekuSpain mabhuku ndinorangarira Archpriest weHita uye zvidimbu zveBhuku rake reRudo Rakanaka.
Dante Aligheri. Chirangaridzo cherufu rwake. 5 sonnets
Dante Aligheri, mudetembi ane mukurumbira wemuItaly wenguva dzose, akafa pazuva rakaita nhasi muna1321. Ndinoyeuka iye aine mashanu emambure ake.
Carmen Conde ndiye mumwe wevananyanduri vanonyanya kuzivikanwa muSpain, aive mukadzi wekutanga kugara pachigaro muRAE. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Medieval Gunyana I. Iwo majarchas uye cantigas de amigo
Chinyorwa chekutanga chakatsaurirwa kumabhuku ekare, uko maMozarabic jarchas uye ma cantigas de amigo ndivo vanopikisa.
Basa raEdgar Allan Poe rinoratidza kutya pamidzi yavo, uye zvakare zvinoratidza hukama hwayo nekushushikana. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake uye zvinyorwa zvake.
Du Fu. Nhetembo shanu dzekurangarira yechinyakare yenhetembo dzeChinese
Du Fu ndomumwe weakakura echinyakare ezvinyorwa zveChina Muchokwadi, anoonekwa se "mudetembi mutsvene." Uku kusarudzwa kwemashanu enhetembo dzake.
Manuel Altolaguirre naEmilio Prados. Vamwe vadetembi makumi maviri neshanu
Manuel Altolaguirre naEmilio Prados vaive vadetembi vaviri veMalaga veGeneration ye27. Nhasi ndinovarangarira uye ndinovasimbisa nematanhatu enhetembo dzavo.
Federico García Lorca: nhetembo dzakatanhamara, hupenyu nebasa
Federico García Lorca aive mumwe wevanyori vane mukurumbira muSpain, nhaka yake yenhetembo yakakura. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
8 Mafirimu Pamusoro peVanyori VeZvese Nguva Uye Mhando
Nhasi ndinoongorora kusarudzwa kwemavhidhiyo masere nezvevanyori veese mazera uye mhando Pakati pavo Dickens, Shakespeare, Tolkien, Christie kana Austen.
Biography uye mabasa aCésar Vallejo
César Vallejo aive mumwe wevanyori vakanyanya kudarika vePeruvia vezana ramakore rechiXNUMX, zvinyorwa zvake zvakaratidza chiitiko chakakosha. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake nebasa.
Biography uye mabasa aNicanor Parra
Fizikisi, nyanzvi yemasvomhu uye munyori, isingabvumirwe, kunyangwe iri yakajeka mubatanidzwa muNicanor Parra. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hweChilean antipoet.
Mario Benedetti ndomumwe wevanyori vakakurumbira muLatin America nemabhuku epasirese. Uyai muzive zvishoma nezve nhetembo yake uye nehupenyu hwake.
Marco Valerio Marcial inokosha pakati pevanyori veRoma. Nekuti ndinomunzwira tsitsi, nhasi ndinorangarira mamwe epigrams ake.
Basa rekunyora raFélix Lope de Vega rinoonekwa seimwe yeakakura uye akakosha muSpain. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu uye mabhuku aLope de Vega.
Gerardo Diego ndomumwe wevadetembi vakuru veGeneration ye27. Santanderino nekuzvarwa, zvisinei akafa mu ...
Antonio Machado aive mumwe wevanyori vadetembera muSpain, nhetembo yake yakaratidza chiitiko chakakosha. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake, basa uye nhaka.
El Cid yadzokera munyika kana pamwe haina kumbobvira yabuda muchitaera. Muchinyorwa chino chekutanga ndichiongorora chimiro chake ndinorangarira mavhesi kubva kuCantar yake uye nedzimwe nhetembo.
Nhetembo dzaPablo Neruda dzakasvika pasirese dzichida kuona nhetembo zvine hungwaru. Huya udzidze zvakawanda nezve hupenyu hwake uye nhetembo yake.
Ramón Gómez de la Serna akazvarwa pazuva rakaita nhasi mu1888 muMadrid. Ini ndinorangarira mamwe ema greguerías ake kupemberera zuva rake rekucherechedza.
Biography uye mabasa aHoracio Quiroga
Horacio Quiroga anoonekwa seanonyanya kutaura ngano nguva dzese, basa rake rizere neakatanga. Uyai muzive zvishoma nezve hupenyu hwake.
Mutsvene Johane weMuchinjikwa. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Nhetembo
Mutsvene Johane weMuchinjikwa akazvarwa muna Chikumi 24, 1542 muFontiveros. Mumiriri chimiro chekuvanzika naSanta Teresa de Jesús. Ndinoratidzira dzimwe nhetembo.
Jorge Luis Borges: kubudirira mutsamba, kuzvidemba murudo
Mune zvinyorwa zveLatin America, Jorge Luis Borges chirevo. Zvino, mune ino chinyorwa iwe uchakwanisa kuziva zvishoma kupfuura hupenyu hwake: rudo rwake.
Luis de Camoes, zuva rekufa kwake. 4 nhetembo
Chirangaridzo chitsva cherufu rwaLuis de Camoes, anozivikanwa kupfuura vese vadetembi vechiPutukezi, anorangarirwa. Idzi ndidzo nhetembo ina dzekurangarira.
Iyo Elemental Odes muenzaniso wakajeka wekuti zvese zvinogona sei kunyorwa nhetembo. Neruda anopa tenzi kirasi munhetembo. Huya, ziva zvishoma nezve iro bhuku.
Kuyeuka Don Pedro Calderón de la Barca. Mitsara makumi maviri uye kunyarara
Icho chiitiko chitsva chekufa kwaPedro Calderón de la Barca, zita rakakurumbira reSpanish Golden Age. Ndinoyeuka mamwe emitsara yake nemavhesi.
Musi waMay 9, 1938, Charles Simic, mudetembi weAmerica akaberekerwa muBelgrade, akazvarwa. Aive Muhwinhi wePulitzer Mubayiro weNhetembo muna 1990. Iyi ndiyo mimwe yenhetembo dzake.
Ida Vitale anokunda iyo Cervantes Prize. 7 nhetembo dzakatanhamara
Mudetembi weUruguay Ida Vitale anokunda iyo 2019 Cervantes Prize, iyo inonyanya kukosha mubairo muSpanish zvinyorwa. Ndinoratidzira nhetembo dzake nomwe.
Francisca Aguirre akashaya ave nemakore makumi masere nemasere. Mukurangarira uyu munyori weAlicante ane basa rakareba kudaro, ndinosimbisa ina yenhetembo dzake.
William Wordsworth. Kusafa kwemadetembo ake
William Wordsworth akazvarwa musi waApril 7, 1770. Pachiitiko ichi chitsva chekuzvarwa kwake ndinosarudza nhetembo nhanhatu kuti ndiongorore basa rake.
Zuva Renyika Dzenhetembo. 8 sonnets yekupemberera
Rimwezve gore nhasi izuva reNyika Dzenhetembo. Ini ndasarudza aya masoneti masere neklassical uye kwete vakadaro vekare vanyori.
Leandro Fernández de Moratín. Sonnets uye epigrams
Leandro Fernández de Moratín akaberekerwa muMadrid pazuva rakaita nhasi muna 1760. Ndinoyeuka munhu wake wenhetembo uye ndinoshanda nevamwe vake masoneti nemapigiramu.
Mharidzo: Ana Lena Rivera naDavid López Sandoval
Ndakaonekana naFebruary nekupinda mharidzo mbiri, iya yeIyo vakafa vakanyarara, naAna Lena Rivera. Uye iyo yekuverenga, naDavid López Sandoval.
Miguel Ángel Buonarotti. Mavhesi ehunyanzvi uye mudetembi
Ichi chiyeuchidzo chitsva cherufu rwehunyanzvi hweRenaissance yaive Miguel Angel Buonarroti. Nhasi ndinomurangarira semunyori wenhetembo.
Varume vatatu vakachenjera. Nhetembo shanu dzakanyorwa nevanyori vashanu
Magi arikuuya. Nhasi ndinozorodza nhetembo shanu nevanyori vashanu vekare vakaita saLope de Vega, Rubén Darío, Santa Teresa de Jesús kana GK Chesterton.
2019. Iwo mabhuku anouya kubva kumarudzi ese uye kune ese munhu
Isu takatotanga 2019 uye rimwe gore rinovimbisa rekunyora rinotimirira. Kuchave nemazita mazhinji akaburitswa uye tinotarisira kuverenga ese. Kana kuda.
Rudyard Kipling. Makore zana nemakumi matatu nematatu ekuberekwa kwake. Nhetembo mbiri
Chirangaridzo chitsva chekuzvarwa kwaRudyard Kipling chinopembererwa. Ini ndinosimbisa nhetembo nhatu kubva kubasa rake: Ehe, Usakanda mapfumo uye ndima kubva kuEpitafios de la guerra.
Nhetembo nomwe dzevanyori vakuru dzakatsaurirwa Kisimusi
Kisimusi zvakare, rimwe gore, inogara iri nyowani kunyangwe iri yekusingaperi. Nhasi ndinogovana nhetembo nomwe nevanyori vakuru vakazvitsaurira kwaari.
Muongorori wenhema Petunia Prado del Bosque anoburitsa muunganidzwa wenhetembo Llueve.
Munyori uye mutori wenhau kubva kuGijon Rosa Valle anoburitsa yake yekutanga muunganidzwa wenhetembo, Llueve, uye anoikweretesa kumunhu wake wekunyepedzera, Tunia, muongorori wekuuraya.
William Blake. Makore makumi maviri nemakumi maviri nenomwe eChirungu shasha yenhetembo neunyanzvi. 261 nhetembo
Nyanduri wechiRungu uye muimbi William Blake, mumwe wevanhu vakakurumbira mumabhuku nehunyanzvi, arikusvitsa makore makumi maviri nematanhatu. Idzi nhetembo nomwe dzekurangarira.
Tinoverenga nhetembo here? Hongu Semuenzaniso, nhetembo idzi nomwe
Tinoverenga nhetembo here? Hongu.Tinopindura nezvikamu izvi zvinomwe zvemadetembo zvakanyorwa nevanyori vemazuva ano vakaita saOffreds, Búho, Brandon, Sastre, Benito, Arévalo naCruz.
Frederick Schiller naArthur Rimbaud. Nhetembo dzemazuva avo ekuberekwa
Ivo vaviri vakazvarwa munaNovember 10. Frederick Schiller naArthur Rimbaud vakave vadetembi vane mukurumbira wepasirese. Nhasi ndinovarangarira nedzimwe nhetembo.
Rafael Alberti, makore 19 asina mudetembi wegungwa. Mavhesi mundangariro dzake
Nhasi uno mucherechedzo wegumi nemapfumbamwe wekufa kwemumwe wevanyori vepamusoro veSpanish, Rafael Alberti Pa 19 ya ...
Samuel Taylor Coleridge. Nhetembo nhatu dzekuzvarwa kwake
Musi waGumiguru 21, 1772, Samuel Taylor Coleridge, mumwe wevatangi veRomanism muEngland, akazvarwa. Nhasi ndinonunura nhatu nhetembo dzake kuti ndimurangarire.
Garcilaso de la Vega. Yake mashanu akanakisa mannets ekumurangarira
Garcilaso de la Vega, mudetembi mukuru weSpanish Renaissance, akafa pazuva rakafanana nanhasi muna 1536 muNice. Mukurangarira kwake akanunura mashanu emambure ake.
Terje Vigen, iyo isingazivikanwe nhetembo yaHenrik Ibsen
Terje Vigen idetembo rakakurumbira rakaburitswa naHenrik Ibsen muna 1882. Hazvizivikanwe neruzhinji rwevanhu, ndeyechinyakare munyika dzeNordic.
Nhasi ndinopemberera kuyeuka kwaJohann Wolfgang von Goethe, baba veGerman Romanticism, vachisimbisa nhetembo dzake nana makumi maviri emitsara yake.
Ichi chiitiko chitsva cherufu rwaLope de Vega, iyo Fénix de los Ingenios. Ini ndinosarudza mashanu sonnets ekurangarira kwako.
Rabindranath Tagore. Makore makumi manomwe nemana asina mukurumbira wevanyanduri veIndia.
Nhasi uno mucherechedzo wegumi nemakumi manomwe nenomwe rekufa kwaRabindranath Tagore, anonyanya kuzivikanwa vadetembi veIndia. Ini ndinoongorora chimiro chake nemamwe mavhesi ake.
Percy Bysshe Shelley. Nhetembo pfupi nhanhatu dzebhavhadhe rake.
Ichi chiyeuchidzo chitsva chekuzvarwa kwaPercy Bysshe Shelley, chimwe chezvinyorwa zveChirungu zvinyorwa zverudo. Heano nhetembo dzake dzakanakisa.
Emily Brontë. Nhetembo nhatu dzerudo kwemakore ake mazana maviri
Nhasi tinopemberera zuva rekuzvarwa mazana maviri raEmily Brontë, munyori wechiRungu uye mudetembi, munyori weWuthering Heights. Kumurangarira idzi nhetembo dzerudo.
Aya mabhuku akanakisa ekuverenga zororo iri anova ekuzorodza mafambiro ayo anofamba pakati pekupara mhosva kana kufamba mabhuku.
Nhasi vanyori vana vakakura vanogovana mazuva avo ekuberekwa. Ivo ndiGeorge Bernard Shaw, Aldous Huxley Antonio Machado naAna María Matute.
Robert Burns. Makore makumi maviri nemaviri nemaviri asina nyanduri ane mukurumbira weScotland 222 nhetembo
Robert Burns ari nhetembo anonyanya kuzivikanwa weScotland, muenzaniso wekudanana kweScotland. Pave nemakore makumi maviri nemaviri kubva zvaakatisiya.
Herman Hesse. Makore zana negumi nemana emunyori akakosha. Zvimwe zvirevo
Herman Hesse aive munyori, nyanduri, munyori wenhau uye pendi, uye akazove mumwe wevanonyanya kukoshesa uye kuverenga zvakanyanya vanyori vezana ramakore rechiXNUMX. Ongororo yebasa rake.
William Butler Yeats. Makore zana nemakumi matatu nematatu emunyori mukuru weIrish. 153 nhetembo
William Butler Yeats ndomumwe wevanyori vadetembi veIreland uye nhasi izuva rake rekuzvarwa. Pane nhetembo dzake nhanhatu dzekukupemberera.
Alexander Pushkin. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 7 nhetembo
Alexander Pushkin ndiye anonyanya kuzivikanwa uye anoyemurwa mudetembi wechiRussia, asi aivewo munyori wenhau uye munyori wemitambo. Ndinosarudza nhetembo nomwe kupemberera kuzvarwa kwake.
Chikumi 5, 1898. Nyanduri wechiSpanish anoverengwa zvakanyanya nguva dzese, Federico García Lorca, anozvarwa. Uye rimwezve gore akapemberera zuva rake rekuzvarwa aine mashanu emanyoni ake.
Algernon Charles Swinburne aive mudetembi wechiChirungu wenguva yeVictorian. Ini ndinoongorora basa rake rinopokana uye ndorangarira mamwe mavhesi ake.
Edmond Rostand. France inopemberera makore zana nemakumi mashanu ekuberekwa kwake.
France yakazivisa gore ra2018 gore rekurangarira nyika Edmond Rostand uye iri kupemberera kuyeuka kwayo kumusha kwayo.
Isu tiri pakati peTeresian jubheri gore 2017-2018 iro rakatanga muna Gumiguru 15 yegore rapfuura Saka ndinoongorora 5 yedzenhetembo idzo dzakatisiyiwa nemusande waAvila, Teresa de Jesús, uyo akazvarwa musi uyu muna 1515.
Zuva Renyika Dzenhetembo. Nhetembo nhatu dzekupemberera.
Nhasi, 21 Kurume, kunocherechedzwa Zuva Renyika Dzenhetembo. Ndinosarudza nhetembo nhanhatu dzaQuevedo, Garcilaso, Gutierre de Cetina, Kipling naBurns, zvinova zvandinofarira, kupemberera zuva rakakosha kudai.
17 mitsara yezvisingakanganwike zvinyorwa zvevakadzi zveZuva reVakadzi iri.
Kurume 8, Zuva Revanhukadzi Renyika Dzese. Ndinoipemberera nekununura mamwe emitsara gumi nemanomwe evanhukadzi echikadzi asingakanganwike.
Nhasi, Kukadzi 26, makore 216 apfuura kubva pakazvarwa Victor Hugo. Iye akaberekerwa muBesançon uye aive zvakare nyanduri ...
Pazuva iri muna 1788, George Gordon Byron, anogara achizivikanwa saIshe Byron, akauya munyika. Isu tinopemberera kuyeuka kwake nemana enhetembo dzake.
Izvozvi zvava makore makumi maviri nemapfumbamwe kubva pakazvarwa Edgar Allan Poe, saka zvekare inguva yekumukorokotedza nekusingaperi kwake semukuru pakati pemakuru eanovel, nyaya, nhetembo uye, pamusoro pezvose, zvekutyisa, iyo kuda uye kunzwa kwakanyanya kukurirwa. Nhasi mamwe emataurirwo ake.
2017 inopera uye pave paine mibairo mizhinji mumabhuku segore rega. Isu tinoongorora zvimwe zvacho muchidimbu.
Don Félix Lope de Vega achangobva kusvitsa makore makumi mashanu nemashanu uye tinoipemberera nekurangarira makumi maviri emitsara yake yakanaka uye mamwe mavhesi ake anozivikanwa.
Vazhinji vanyori nevanyori vanobva kunzvimbo muLa Mancha inonzi La Solana
Ini ndinoramba ndichiongorora vanyori nevanyori kubva kuguta rangu, La Solana, mumoyo weCastilla La Mancha. Nhasi uno vadetembi nevanyori venhoroondo pamwe nevanyori vemitambo.
Vamwe vanyori vanobva kunzvimbo iri muLa Mancha inonzi La Solana
La Solana, guta riri muCiudad Real, ndiro guta rangu. Kuongororwa kwemamwe emazita makuru pane emunharaunda mabhuku.
Miguel Hernandez. Makore 110 nyanduri asingafi. Kusarudzwa kwenhetembo
Iwo makore zana negumi kubva kuberekwa kwaMiguel Hernández, mumwe wevanonyanya kudetemba muzvinyorwa zveSpanish. Saka tinopemberera.
Autumn iri kuuya, mazuva ari kuwedzera kureba, iyo inotonhorera iri kuuya uye zvinoita sekunge kune yakawanda nguva yekuverenga. Aya mabhuku gumi anogona kuve chirevo chakanaka.
Alfred Tennyson naPaul Verlaine. Mitsara uye nhetembo dzekurangarira.
Ishe Alfred Tennyson naPaul Verlaine. Chishoma chehupenyu hwake, zvirevo zvake uye nhetembo dzake zveyi Nyamavhuvhu inopisa uye pazororo.
Mabhuku matanhatu ezororo pazororo rino uye kune wese munhu
Iwo mazororo echinyakare echinyakare anotanga mumwedzi uno uchangoburitswa muna Chikunguru. Ini ndinokurudzira 6 mazita ekuverenga chaizvo nezve zororo.
Iko kuunganidzwa kwenhetembo "Zvakawanda sekurwadziwa" naTyler Knott izvozvi zviri kutengeswa
Nhasi tinouya neruzivo rwekunyora: muunganidzwa wenhetembo dzaTyler Knott "Zvakanyanya Sezvazvinorwadza" nhetembo dziri kutengeswa kubva muna Chikumi 6.
Pave nemakore zana nemakumi manomwe nemapfumbamwe kubva pakazvarwa Federico García Lorca. Isu tinosarudza mamwe mavhesi nemitsara kubva kumabasa ake kuyeuka kwako.
José de Espronceda. Makore 175 mushure mekufa kwake. Kusarudzwa kwendima.
Tinorangarira José de Espronceda, mumwe wevanyori vadiki vekuSpain vane rudo, pagore rechi 175 rekufa kwake, aine sarudzo yemavhesi ake.
4 nhetembo huru dzeChishanu Chakanaka. Asingazivikanwe, Lope, Machado uye Mistral
4 nhetembo dzeIsita. Ndinonunura mazita mana makuru vakanyora mamwe emavhesi akanakisa kuverenga mazuva aya.
London. Guta guru reUnited Kingdom rakapfuma uye rakakura munhoroondo yaro sechikonzero chekuverenga uye nguva dzose unoda kurishanyira. Mazita mashoma pamusoro pake.
Nhasi, 21 Kurume, World Poetry Day inopembererwa. Ndokusaka tichikuunzira izvi zvakakosha nezve iyi mutinhimira uye mimhanzi mhando.
Hwakanyorova husiku… makore 196 mushure mekufa kwaJohn Keats
John Keats aive mumwe wevanonyanya kudetemba vadetembi vezana ramakore rechi196. Nhasi anocherekedza makore XNUMX erufu rwake muRome. Basa rake rakakosha.
25 mitsara naGustavo Adolfo Bécquer pagore rekuzvarwa kwake
Ichi chiyeuchidzo chitsva chekuzvarwa kwaGustavo Adolfo Bécquer. Munyori weSevillian anoenderera mberi achiva mucherechedzo wenhetembo dzerudo.
Tiri pamusuwo weZuva reValentine. Bato rerudo par kugona uye kunzwa kwepasirese kunokurudzira zviuru zvemitsara yekunyora. Tinoongorora.
Hovik Keuchkerian, mutambi, wekare-mutambi wetsiva, munyori uye mudetembi.
Hovik Keuchkerian, anonyanya kuzivikanwa nebasa rake semutambi uye simuka-munyori, zvakare munyori uye mudetembi. Isu tinoona basa rake.
Muchinyorwa chino chechipiri nechokupedzisira pa Contemporary Latin American Nhetembo tinokuunzira mazita matatu matsva: Vallejo, Huidobro naOctavio Paz.
Muchinyorwa chino tinodoma uye nekutsanangura muchidimbu ma greats matatu enguva dzeLatin America nhetembo: Mistral, Neruda naMarti.
Pazuva rakaita nhasi Vicente Aleixandre akashaya
Muna 1984, pazuva iri Vicente Aleixandre, mumwe wevanyanduri vanonyanya kuzivikanwa veSpanish veGeneration ye '27, akashaya.
Ndege Yakakwirira, naJohn Gillespie Magee Jr. Makore makumi manomwe neshanu yenhetembo yeAirmen
Nyamavhuvhu yakaratidza makore makumi manomwe nemashanu enhetembo yakakurumbira yakanyorwa nemutyairi weCanada John Gillespie Magee Jr.
«Fractal», bhuku nyowani-dambarefu renhetembo nemunyori wemitambo uye mudetembi David Fernández Rivera
Muchinyorwa chino tinopa anthology "Fractal", iro idzva disco bhuku remunyori weVigo uye munyori wemitambo David Fernández Rivera.
Nhetembo shanu dzerudo
Vanoti izvo zvinonzwisiswa nhasi nerudo hachisi rudo rwechokwadi ... Kuti rudo rwaive chinhu ...
Maitiro aPablo Neruda
Ongororo yakazara yeiyo masitayera uye zviratidzo zvinoshandiswa naiye mukuru Pablo Neruda, mumwe weanyanduri vakanakisa venguva dzese.
Pazuva rakaita nhasi Luis de Góngora akashaya
Hongu, pazuva rakadai saLuis de Góngora afa nhasi, kunyanya muna Chivabvu 23, 1627. Yaive imwe ...
Vakuru vadetembi veMabhuku
Nhasi, Kurume 21, International Poetry Day, tanga tichida kuita yakakosha nezve avo vadetembi vakakurumbira ...
Nhasi uno mucherechedzo wechigumi nemakumi masere ekuberekwa kwaGustavo Adolfo Bécquer
Iwo pamazuva senge nhasi apo ini ndiri kunyanya kufara kugona kunyora nezve zvinyorwa. Icho chikonzero, apa: Nhasi ...
Nhoroondo yaRubén Darío
Isu tinokuudza iyo biography yaRubén Darío aine zvimwe zvipfupi zvinyorwa nezve hupenyu hwanyanduri uyo akamaka pamberi uye mushure mezvinyorwa nemipiro yake. Unoziva nhoroondo yayo here?
Vanyori veAndalusian II: Joaquín Sabina
Andalusian vadetembi II: Joaquín Sabina. Muimbi-munyori wenziyo uye mudetembi, akaberekerwa muEbeda (Jaén). Ziva mazwi enhetembo dzake, pano.
Vadetembi Andalusia I: Luis García Montero
Vadetembi Andalusia I: Luis García Montero. Chinyorwa chekutanga chevanoverengeka chinouya mune zvakateedzana pamusoro pevanyori veAndalusian nhetembo.
Kubvunzana naMarwan: mangwana, Chivabvu 19, bhuku rake idzva "Hupenyu hwangu hwese uinewe" richaburitswa, rakaburitswa nePlaneta imba yekutsikisa.
Nhasi tinorangarira Pablo Neruda nenyaya ino inodakadza. Uri kupi Chilean? Ndakusuwa!
Vanyori Vanhasi (I)
Vadetembi vemazuva ano (I): Nhetembo hadzina kufa uye havafi vakaita kuti dzife.
Ibhuku ripi randinopa Krisimasi ino? Kusava nechokwadi kunokurwisa asi heano mamwe mhinduro.
Pane imwe yenyaya nomwe idzi nhetembo dzakaitwa rwiyo ruzha rwaunoziva iwe? Waizviziva here kuti akanyorwa nanyanduri vanozivikanwa? Tsvaga nhetembo dzakanakisisa dzakamboimbwa
Makwikwi enhetembo anozoitika muna Gunyana 2013
Matanho munhetembo dzaBlas de Otero
Muchikamu chino tinotaura muchidimbu nezve nhetembo dzakasiyana dzeBlas de Otero
"Vanakomana Vehasha" naDámaso Alonso
Ongororo pfupi yebasa raDámaso Alonso "Hijos de la ira"
Dzokororo misoro mune basa raPablo Neruda
Brief ongororo huru dingindira mushumo nyanduri Pablo Neruda
Dzokororo misoro muCésar Vallejo
Kudzokororwa kwemusoro wenyaya mune basa raCésar Vallejo, mudetembi ane mukurumbira wePeruvia
Kuongororwa kwemazita uye zvinoreva basa remunyori Vicente Aleixandre
Dzokororo misoro mune basa raAleixandre
Ongororo pfupi ye «Sailor pane ivhu»
Ongororo pfupi yebasa raRafael Alberti Marinero en Tierra
Dzokororo misoro muRafael Alberti
Dzokororo misoro mudetembo remunyori mukuru wechiSpanish Rafael Alberti
Dzokororo misoro muGarcia Lorca
Misoro inodzokororwa mumabasa aLorca inoburitswa muchidimbu muchinyorwa chino
Iko kushanduka kweiyo Generation ye27
Muchinyorwa chino tinofumura muchidimbu matanho akasiyana akasangana nechizvarwa chemakumi maviri nenomwe
Ongororo pfupi yezviri mukati uye chimiro chebasa "Galleries, Solitudes uye dzimwe nhetembo" naAntonio Machado
Kudzokororwa kwemusoro wenyaya webhuku "Nziyo dzehupenyu netariro" nemunyori mukuru Rubén Darío
"Nziyo dzehupenyu netariro", rechitatu basa rakakura naRubén Darío
Tsananguro pfupi yezvinoreva "Nziyo dzehupenyu netariro" basa rakakura remunyori Rubén Darío
Pamusoro pezvinyorwa zvitsva
Mumazuva ano, mune dzino nguva dzinotikomba, dzinotikomberedza, dzinotinzwisisa, zvinyorwa zvakapa ...
«Iwo Mashoko neMazuva», Octavio Paz
ICONACULTA (National Council for Culture uye Arts), kuburikidza neGeneral Directorate yeMabhuku, uye ...
Mufananidzo uyo nhetembo dzakapfuura zvese kutaura nekunyarara. Mukadzi akagadzira nyama mu ...
Marechal uye kuuya kwake kusingaperi kuuya ...
Munyori asina kumbomira kana asingazombomira kuve nechido nezvangu ndiLeopoldo Marechal. Vazhinji vanofanirwa kuzviziva, sekuwanda kunoita ...
Kuda kuziva nezve nhetembo nemimhanzi
Dzimwe nguva, vamwe vanhu, kana vachida kutaura kuti mazwi erwiyo akanaka kwazvo, vanoti ndiwo ...
Iyo "Rwiyo rweRoldan" uye Hondo yeHastings
Zvakaitika muna Gumiguru 1066. Musi wa14, padyo neHastings, muridzi wengoma weNorman anonzi Taillefer akatanga ku ...